HTC သည် Blockchain နည်းပညာဖြင့်ဖုန်းအသစ်ကိုပြင်ဆင်သည် Androidsis
Nerea Pereira | | HTC က
HTC ၏နေ့ရက်များကိုရေတွက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းနှစ်သက်သူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်ကျက်သရေရှိသော HTC One M7 ကို ဆက်လက်၍ ချစ်မြတ်နိုးစွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည်တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်အလွန်ဆိုးဝါးစွာပြုမူခဲ့ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ချင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Chen Xingshen, အော်ပရေးရှင်း၏ဒါရိုက်တာ HTC က.
ထို့အပြင်ဤအဆင့်မြင့် HTC အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်နိုင်ငံတကာဖြန့်ချိရေးလျှောက်လွှာဖိုရမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစွမ်းအားတစ်ခုအား အသုံးပြု၍ အသစ်ထွက်ရှိမှု HTC သော Blockchain နည်းပညာရှိခြင်းအဘို့အထွက်မတ်တပ်ရပ်လိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ HTC သည်စျေးကွက်အတွင်းထွက်ပေါက်အနည်းငယ်သာရှိသည့် terminal ကိုစတင်ခြင်းအတွက်ဆက်လက်လောင်းနေသည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော HTC Exodus သည်ကုမ္ပဏီမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ပုံမှန်, cryptocurrency ပူဖောင်းပေါက်ကွဲပြီးသူတို့ရဲ့စျေးကွက်တန်ဖိုးလွန်စွာကျဆင်းသွားပြီစဉ်းစား။ သို့သော်ကုမ္ပဏီက၎င်းကိုပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ဖုန်းကိုလောင်းချင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အတိအကျ, အ Samsung Galaxy S10 နဲ့အတူတူပါပဲ။
ထို့အပြင် Xingshen ၏ကောင်းကျိုးများအရသတင်းအချက်အလက်ခိုးယူခြင်းများကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲလျှို့ဝှက်အချက်အလက်နှင့်လျှို့ဝှက်ဒေတာများကိုကယ်တင်ရန်အတွက်၎င်းကိရိယာသည်လည်ပတ်စနစ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောလုံခြုံရေး module တစ်ခုအတွက်လောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းစက်သည်ပိုမိုလုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထင်ရှားသည်မှာ HTC ၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်ထွက်မြောက်ရာကိုဆက်ခံသူနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်မပေးသော်လည်း၎င်းသည်အတော်အတန်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။
Blockchain နည်းပညာဖြင့်ပထမဆုံး HTC ဖုန်းသည် RAM 845 GB၊ Internal Storage6GB နှင့် QHD + resolution ပါသည့် ၆ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်အတူ Qualcomm Snapdragon 128 ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပါလာသည်။ ၎င်း၏လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ? နက်နဲသောအရာတခုကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သော်လည်းဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည်လူသတ်မှုကိုသေစေလိုသည်။ blockchain နည်းပညာဖြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုစတင်မည်
Realme သည်ဥရောပသို့ဆိုက်ရောက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Xiaomi အတွက်ပြိုင်ဘက်အသစ်လား။
ဤကြော်ငြာပုံသည် OnePlus7Pro ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည်